Ciyaaryahanka M4V: Sida loo Play M4V Files
> Resource > Video > Sida loo Play files M4V
"Hi oo dhan. Baan u soo bixi filimada .m4v qaar ka mid ah (mpeg-4). Laakiin si aanan iyaga u ciyaari karaa mid ka mid ah ciyaartoyda aan hadda jira, oo ay ku jiraan Media Player, Player Real, VLC iyo QuickTime. Qof kasta oo la ogaado waxa ciyaaryahan ayaan isticmaali karaa si ciyaaro, kuwaas oo files M4V? Thanks ka hor. "
Ma ciyaari karaa file M4V ah ee kombiyuutarka? Ha welwelin. Qodobadaan waa kuwa inta badan loola jeedo in lagu xaliyo this M4V arrinta loo maqli karo labadaba Windows iyo Mac. Marka hore, aynu dheeraad ah oo ku saabsan qaab M4V ku bartaan.
File M4V waa caadi video format weel ee ay Apple. Waxanu mid M4V lagu yaqaan waa ilaalinta DRM copyright ka Apple ee. Apple isticmaali DRM M4V dukaanka Lugood si looga fogaado-gudubka xuquuqda. Waxaad ka ciyaari karaan oo keliya files ilaaliyo M4V kombiyuuterada idman iyo aaladaha Apple. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii uu qaab beddelidda, ka dib markii, files M4V furmi karaa noocyo kala duwan oo ciyaartoyda warbaahinta ka sokow Apple Lugood, QuickTime Player, VLC media player ama iwm
Halkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa codsi buuxa u ciyaarin si loogu badalo Lugood iibsaday M4V iyo files caadi M4V si aad iyaga ka ciyaari kara wax kasta oo warbaahinta ciyaaryahanka iyo qalabka. Waa Wondershare ku Video Converter ( Video Converter u Mac ). Intii aanay, download, rakibi iyo abuurtaan codsigan.
1 dar files M4V
Guji ku Add Files button inay dajiyaan aad M4V iibsaday ama faylasha caadi M4V ka kombiyuutarka in barnaamijkan.
2 Dooro qaab ku habboon wax soo saarka
Wuxuu furaa Qaabka Output suuqa kala hoos-hoos 's in ay doortaan aad ciyaaryahan, qalabka ama taageeray qaabab video.
3 Start video diinta
Hit ka badalo badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Ka dib markii in, files laguu soo leexin doonaa qaab wax soo saarka go'aansaday. Sidaas, waxaad Radidiyaha karaan faylasha M4V (oo ay ku jiraan kuwa ku iibsaday) si kastaba ha ahaatee aad rabtid in aad.
Fiiro Gaar ah: Wixii Lugood iibsaday files M4V, kaliya waxaad iyaga u bedeli karaan in Windows laakiin ma Mac.
Qaab M4V waa qaab Apple ah. Sida caadiga ah, waxaa lagu uusan ciyaarin karin in ciyaaryahano Windows-ku salaysan sida Windows Media Player. Sidaa awgeed, waxaan soo jeedin doonaa yout si ay u daawadaan ku Wondershare Player ay sabab u tahay taageero qaab ballaaran. Iyadoo ciyaaryahankaan warbaahinta galnay, aad ku raaxaysan karaan loo maqli aan xuduud lahayn oo qaab hufan aad movies oo dhan, video clips iyo music. Uma baahnid in aad dib u soo ka mid media player in kale mar dambe soo kabsato, Wondershare Player oo dhan aad warbaahinta dhijitaalka ah inay nolosha ku soo dejin doonaa in hal barnaamij!